သင့်လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှပသေသပ်အောင် ပြုလုပ်ပြီးပြီလား? - Phoenix Emperor
Home / Blog / သင့်လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှပသေသပ်အောင် ပြုလုပ်ပြီးပြီလား?
ယနေ့ခေတ်မှာ လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် လှပသေသပ်ခြင်းဟာလည်း ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတိုင်း လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာပါပြီ။ လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် လှပ်သေသပ်ခြင်းဟာ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ဆက်စပ်နေပါတယ်။
သင့်လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် လှပသေသပ်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
၁။ သင့်လုပ်ငန်းအပေါ် ပထမဆုံး အထင်အမြင် (First Impression) ကို ကောင်းမွန်စေသည်
ပထမဆုံး အထင်အမြင် (First Impression) ဟာ လုပ်ငန်းတိုင်း နယ်ပယ်တိုင်းမှာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်မှာ First Impression ပြန်ရဖို့ ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့ အခွင့်အရေးမရှိလို့ပါ။ သင့် customer တွေ သင်နဲ့အကျိုးတူ ပူးပေါင်းမယ့်ဧည့်သည်တွေဟာ သင် သို့မဟုတ် သင့်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ မတွေ့ခင် သင့်လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အရင်တွေ့ရမှာပါ။ သင့်လုပ်ငန်းခွင် လှပသေသပ်ခြင်းက သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ First Impression ကို အရမ်း အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
၂။ သင့်လုပ်ငန်း၏ Brand ကို မြှင့်တင်စေသည်
သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ Brand ဆိုတာသူများက ပြောတဲ့ သင့်လုပ်ငန်းအကြောင်းပါ။ သင်ဟာ အရမ်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ product တွေ service တွေပေးနေပေမယ့် သင့်လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လှပသေသပ်မှုက သင့်လုပ်ငန်း Brand ထဲမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်နေပါတယ်။ သင့်လုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင်သာ လှပသေသပ်မှုမရှိရင် သင့်လုပ်ငန်းခွင်ရောက်လာတဲ့ သူတွေဆီမှာ သင့် Brand ထိခိုက်နေပါပြီ။ သင့်လုပ်ငန်း Brand မြှင့်တင်ရန် လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် လှပသေသပ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
၃။ သင့်ဝန်ထမ်းများကို ပျော်ရွှင်စေသည်
“Customer First” သင့်ဖောက်သည်တွေကို ပထမဦးစားပေးပါ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ် အလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ “Employee First, Customer Second” ရယ်လို့ ဖြစ်လာပါပြီ။ Customer က စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့အခါ အရောင်းတစ်ခုရဖို့ မသေချာသလောက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေ ပျော်ရွှင်အောင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်လုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင် လှပသေသပ်ခြင်းဟာလည်း ဝန်ထမ်းတွေပျော်ရွှင်စေတဲ့ အချက် တစ်ချက်ပါ။
၄။ သင်နှင့်တကွ လုပ်ငန်းခွင်၏ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုစေသည်
သင့်လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် လှပသေသပ်ခြင်းကြောင့် လေကောင်းလေသန့်ရရှိခြင်း၊ အမှိုက်ဖုန်မှုန့်များကင်းစင်ခြင်း စသည့်အကျိုးများကြောင့် သင်နှင့်တကွ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုစေပါသည်။
Phoenix Emperor Group မှ အိမ်တွင်းအလှဆင်ခြင်းအမျိုးမျိုး၊ ရုံးခန်း၊ အိမ်ခန်း ပြုပြင်အလှဆင်ခြင်း၊ PAE ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စတီးအလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအပြင်၊ အအေးခန်းသုံးပစ္စည်းများကို အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ ကားအရောင်းပြခန်း၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဘီယာဆိုင်၊ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်၊ ကားပါကင် စသည်တို့ကို Steel Structure ဖြင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဦးဆောင်၍ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ အမြန်တည်ဆောက် ပေးပါသည်။ မိမိသိရှိလိုသော အချက်အလက်များကိုလည်း ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။